जापान पुगेका क्याप्टेन विजय लामाले सम्झे नेपाल, भावुक हुँदै गरे यस्तो आह्वान – ताजा समाचार
जापान पुगेका क्याप्टेन विजय लामाले सम्झे नेपाल, भावुक हुँदै गरे यस्तो आह्वान
विजय लामा । ओसाका स्तिथ म बसेको होटेलको मेरो कोठाको झ्यालबाट देखिने दृश्यलाई कैद गर्न खोझ्दा मेरो मनमा हाम्रो नेपाल पनि कहिले यस्तो होला भनेर आउँछ । असम्भव त कुनै कुराको पनि छैन तर सम्भव बनाउन कठिन देख्छु किनकी जबसम्म हामी नेपाली नागरिक नै यहाँको नागरिक जस्तै देश बनाउने चेतनामा बस्दैनाँै, देशप्रति इमान्दार हुन्नौँ र सधैँ दोष जति अरु माथिमात्र थेग्छौ तब सम्म केही हुने वाला छैन । देश जनताले नै बनाउने हो, कसैले हैन ।
अझै भन्ने हो भने राजनीति दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरुको भरमा मात्र देशलाइ सुम्पिनु जस्तो गलत सोच राख्नु ठूलो गल्ती हो हाम्रो । उनीहरुलाई गाली गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु झन ठूलो अपराध होइन र ? त्यसैले मित्रहरु, उठ्नु पर्यो आ आफ्नो ठाउँबाट देशको लागि नकि कसैको भर परेर बस्नु । जापान जस्तो केही प्राकृतिक श्रोत नभएको देश त यस्तो बिकसित मुलुक बन्न सक्छ भने प्राकृतिक श्रोतको धनी देश नेपाल किन हुन सक्दैन ? सोचको मात्र कमि भएको हो, अरु केही हैन, सोच बद्लौ देश बनाउन लम्कौँ । शुभ दिन सबैलाई, जय चन्द्र सूर्य ।
हेर्नुहोस विजय लामाले खिचेका केही तस्विरहरु
प्रकाशित भएको : September 22nd, 2019